Umatshini weTatoo abavelisi, abaXhasi - China Umatshini weTatoo Umatshini
Ubunzima bomnatha: 253g Ubungakanani: 142.5mm * 36.5mm (35.3mm ngenxalenye yokubamba) Imoto: Isithuthi esincinci esincinci (17 * 19.8mm) Isinxibelelanisi: uhlobo-c ujongano (i-USB-C) Iphakheji: Lithium ibhetri yokubhala umvambo + intambo Umbala: Isangqa esimnyama esimnyama-isangqa esimnyama sesangqa Isikhundla seGear: Isikhundla sevolthi yokuma 5-12V Ulwakhiwo: Isakhiwo sebali yebhetri edityanisiweyo, ibhetri ye-lithium eyakhelweyo, icandelo lebhetri linokujikeleziswa lisuswe; Iyasebenza: 1. Uninzi lweenaliti ezihlanganisiweyo kwimarike (ubungakanani obuqhelekileyo beCheyenne); 2. Akukho ch ...
Ubuchwephesha beCopper Tattoo Coil Machine Umatshini weCNC oCwengiweyo oMatshini weTattoo oMatshini
Isakhelo se tattoo kumatshini we tattoo senziwe ngobhedu oluphezulu, ucingo-electrode ukusika kunye ne-CNC eqingqiweyo. Umatshini we tattoo usetyenziselwa ii-coil ezenziwe ngezandla eziyi-12 (ucingo lwentambo olungeniswe ngaphandle), ukusebenza okuphezulu kwe-liner kunye ne-Shader. Umatshini weTattoo usebenza ngokuzinzileyo, isantya esingafaniyo, imigca egudileyo, ukuba lula kuMbala, ukunciphisa ukonakala kolusu. Zilungele zonke iintlobo zokubamba umvambo kunye neenaliti ze tattoo. UQHAGAMSHELWANO OLUFANELEKILEYO LWEKOPA Icocekile yobhedu ...
Umatshini weOm Premium Tattoo Coil oGcisa weTattoo oqeqeshiweyo
1. ILiner kunye neShader. Kulula ukuphatha nokulawula. Ukuhambelana okubanzi Sebenza ngazo zonke izinto ezibambekayo, iityhubhu, iinaliti kunye ne-6-8V yokuhambisa umbane ngentambo yeklip. 2. Umgangatho ophezulu woMatshini weTattoo Isakhelo esenziwe ngeCarbon Steel ngokusebenza okuphezulu kunye ne-inductance ephantsi, kukhokelela kuzinzo oluhle. Ipolishi yesandla, unyango lobushushu obuphezulu ukusasaza ubushushu kunye nokusebenza kakuhle. Iikhoyili10 iiWarps Coils, 32mm Height.Anaerobic ucingo lobhedu, ucingo olucocekileyo. 4. Armature bar42mm, Pure Soft intsimbi.High magn ...
Umatshini weTattoo Coil osongelwe ngabaQalayo, ofanelekile kwikhithi yabaqalayo ye tattoo
ISICELO: Zombini ezenzelwe i-liner kunye ne-shader. Zilungele zonke iintlobo zokubamba kunye neenaliti Iinkcazo: Zenziwe nge-alloy zinc, umatshini wokusebenzisa umatshini wobugcisa, unokuqhuba kakuhle nangokukhawuleza. Ngama-8 okusonga ohlobo kunye nokusebenza okuzinzileyo, inokusebenza iiyure ezingama-6 ngokuzolula ngaphandle kobushushu. Zombini zeliner kunye ne-shader. Zilungele zonke iintlobo zokubamba kunye neenaliti Intwasahlobo inelastic ephezulu yokusebenza kwexesha elide: Igama leMveliso: Umxholo wePattoo Machine Package: 1pcs x Umatshini weTattoo Material: iZinc Allo ...
Ukusasaza ngokukhawuleza ubushushu boTattoo Coil Oomatshini bezixhobo zeTattoo Supplies Kit
Umsebenzi onamandla: Umatshini we tattoo usebenzisa ucingo lobhedu, olunokuqhuba kombane okuphezulu kunye nokuqina kwemagnethi kunye nomgangatho onokuthenjwa. Intwasahlobo yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zokudibanisa kunye nokuqina okuphezulu kunye nokudinwa. Isiqalo esiqhelekileyo se-5V, ukusebenza kwamandla ombane 7-10v, ukuzinza okuzinzileyo, ukuqinisa umazibuthe wesihlalo esingasemva. Co Ikhoyili ephindwe kabini: Umatshini we tattoo wenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zealuminium alloy, ezotywe ngesandla, entle nekhuselekileyo. Imilo yomzimba yahluke kakhulu, kwaye ikumgangatho ophezulu ...
Umatshini weK2 Revolution weTattoo Cartridge
Imoto yaseJamani engenasiseko 25x22mm Isantya sokujikeleza: I-12V 11000rpm Torque: 420g Iinkcukacha ezikhawulezayo: Uhlobo olusisigxina: I-Tattoo Gun Material: Uhlobo lwe-Aluminium yoGuquko: Indawo yombane: Zhejiang, China Igama leBrand: K2 Inombolo yemodeli: MDJ-166 Igama lemveliso: K2 Revolution Isinxibelelanisi somatshini weCartridge: Imoto yeRCA: Isantya seNqwelo-mafutha yaseJamani esiyi-25x22mm Isantya: 12V 11000rpm Ubude beNaliti ehlengahlengiswayo: Ukupakisha okungu-0.1-4mm: 1pc / ibhokisi ubunzima: 0.6kg Umbala: Ipinki, Mnyama, iGolide iluncedo: Ukusetyenziswa okuzinzileyo kwe: Tattoo Ndiyi-odola njani ...
Isantya saseJamani esingajikelezi zimoto esijikelezayo: I-12V 11000rpm 480 itorque enkulu I-AIR FREIGHT: Eyona ndlela yokuhambisa ngenqanawa ubungakanani obuphakathi (ngaphezulu kwe-100kg) okanye xa umda wexesha lakho ungekhe ulinde ukuthuthwa kolwandle. Amaxabiso okuthuthwa komoya asekwe kubunzima nakwivolumu. Ezinye izinto ezinjengogwebu zithatha indawo eninzi kodwa zikhanya kakhulu kwaye ezinye izinto ezinje ngentsimbi zinzima kakhulu kodwa zithatha indawo encinci. Okwenziweyo iindleko zothutho zithatha ubunzima kunye nomthamo zombini ukuba ziqwalaselwe. Ngokubanzi, ixesha lokuhamba alikho ngaphezulu kwe-10 yokusebenza d ...
IPHISE Umatshini weTattoo Cartridge
Isantya esijikelezayo seMoto esiSiseko: 9000rpm Ubude beNaliti ehlengahlengiswayo: 0 - 3.5mm 1. Imoto engenasiseko, isantya se-12/9000 siqinisekisa uzinzo lomatshini, amandla omelele: 2. Ukonakala kwesikhumba okuphantsi, ingxolo ephantsi, umbala okhawulezayo akukho msebenzi ushushu phakathi! Umzimba wenziwe ngealuminium yokuhamba ngenqwelo moya; ichanekile ngokuchanekileyo ngesixhobo somatshini we-CNC we-axis ezintlanu ukuqinisekisa ukugqibelela komzimba kunye nokuchaneka kobukhulu! 3. Umphezulu we-fuselage ukhazimlisiwe ngesipili kwaye ...
Ubunzima bomnatha: umatshini omnye: 85g ubunzima obukhulu: 170g Ubungakanani: Umatshini omnye: 50x52x33mm (kubandakanya ubude bentonga 91mm) Stroke: Ubuninzi bokukhutshwa kwenaliti 4mm Ukupakisha: ibhokisi yeziciko ephezulu nangasezantsi Umbala: Imibala esi-7 ebomvu-luhlaza-golide-isilivere- pink- Uluhlu oluMfusa-luhlaza lolungelelwaniso: umatshini * 1 intonga yethimble * 2 iphakheji encinci yokuncedisa * 1 Ngokuzithandela: isiphatho kunye neparamitha zocingo: 1. Isinxibelelanisi: RCA ujongano 2. Izinto: IAluminiyam ingxubevange 3. Inkqubo: I-CNC idityaniswe ngokuchanekileyo nangokukrola. iimoto 5. Ukuqala kombane: 4-5v ...
Umatshini weTattoo Cartridge oMnyama
Ubunzima bomnatha: umatshini omnye: i-74g kunye nesiphatho: 170g Gross weight: single machine: 170g plus handle: 280g Size: Single machine: 35 * 63 * 110 (pole pole) mm plus handle: 133 * 35mm Handle size: 83.8 * 30.5mm Ukupakisha: ibhokisi yesiciko esingasentla nesezantsi Umbala: Imibala emi-6 emnyama-ebomvu-yegolide -mfusa-siliva-grey-champagne Uluhlu lokumisela: umatshini * 1 intonga yokudlulisa * 3 iphakheji encinci yokuncedisa * isiphatho esi-1 (ukhetho) Iiparameter: Ujongano: RCA ujongano 2 Isixhobo: IAluminiyam ingxubevange 3. Ubugcisa: I-CNC idityaniswe ngokuchaneka ngokuchanekileyo kwe-4 ...
Umatshini weKingKong 2 weTattoo Cartridge
Isithuthi: I-USA Isantya esijikelezayo seMoto esijikelezayo: I-12000rpm Ubude beNaliti eguqulwayo: 0.1 - 4mm DC isinxibelelanisi, ukuqhuba kakuhle. Isantya esiphezulu kunye namandla anamandla, aphezulu ngokufanelekileyo. Amandla azinzileyo, hayi ubushushu emva kweeyure eziyi-8 usebenza. Ingxolo ephantsi, ibonelela ngendawo yokuthula kubazobi be tattoo kunye nabathengi. Usebenza njani amaxabiso? Okukhona u-odola ixabiso elisezantsi oya kuba nakho ukufumana. Oku kuyinyani ngokukodwa kwiimveliso ze-OEM / ODM kuba zenzelwe wena KUPHELA. Lonke uphuhliso, luyile ...
Umatshini weShell weTattoo ojikelezayo
Umgangatho oMkhulu we-9V 12000rpm weTattoo Machine DC ujongano eJamani I-Faulhaber Motor Shell Tattoo Rotary Machine Inkcazo: Umatshini akananto yealuminium alloy ezenziwe izakhelo ezinomthombo wokukhanya kwe-LED xa zenziwe zasebenza kunye nokususa, ukutshintsha kwebumpers esecaleni kunye nekhava yekham. Lo matshini uphinde usebenzise isixhobo esitsha esinelungelo lokushicilela esine patent esineebha ezintathu zokutyhala-ezithambileyo, eziphakathi kunye nezinzima. Iimpawu ezongezelelekileyo zibandakanya uvakalelo lwe-non-polarity kwaye akukho kulibaziseka kokuqala. Umatshini une-billet al ...